२२औँ शताब्दीको कल्पना ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२२औँ शताब्दीको कल्पना !
२०७० मंसिर ६, बिहीबार ०३:३० गते
अर्को शताब्दी नजिकिँदै गर्दा मनमा कताकता उत्साह जाग्यो । साँच्चै नै कस्तो होला त नेपालको बाइसौँ शताब्दी ? आविष्कारको शताब्दी भनेर चिनिएको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा जन्मिएका हामी अभावको देशमा हुर्कियौँ, बढ्यौँ । त्यही भएर पनि होला, २२ औँ शताब्दीको कल्पना गर्न मन लागेको ।
समुद्रको छेउले पक्कै नछोला, नेपाल नेपाल नै रहला । आशा गरौँ तर भर नपरौँ यी नेताको । कल्पना गर्ने नै हो भने सकारात्मक नै गरौँ होला । के सगरमाथा नामको अन्तरिक्ष आकाशमा उड्ला ? के मर्सिडिज, बी. एम. डब्लु नेपाली सडकमा गुड्ला ? के नुनभन्दा सुन सस्तो होला ? अरु केही पनि नभए नेपाल टेलिकमको कलको दर पक्कै कम होला । देशमा विकासको लहर छाउला । सबै जनताले गाँस, बास, कपास पाउलान् । आज खोलो खानेले भोलि भात पाउला । अरु केही पनि नभए २२औँ शताब्दीसम्म संविधान त पक्कै आउला ।
यी त भए आश गर्ने तर भर नपर्ने कुराहरु । मान्छेमा सिङ, पुच्छर, पखेँटा पक्कै नजोडिएला । हुन त कलियुग भन्छन्, के होला के होला ! विज्ञानको भर छैन । आज उड्ने जहाज बनाउनेले भोलिको शताब्दीमा मान्छेमा पखेँटा नजोड्ला भन्न सकिन्न । अबको शताब्दीमा प्रकृतिको भन्दा विज्ञानको डर हुने होला । हिरोसिमा, नागासाकीका जस्ता एटम बम कति खस्ला, खस्ला !
मेरो कल्पना अलिक टाढै पो गयो कि, अब आफ्नो देशको कल्पना गर्नुपर्ला । के मेची–महाकाली रेलवे सेवा २२औँ शताब्दीसम्म आउला ? अब काठमाडौँलाई मेलम्ची ल्याएर बगाउँछु भन्नेलाई सोध्छु– के २२औँ शताब्दीसम्म मेलम्ची आउला ? आउला र खाउँला ।
अब कुरा गरौँ, नेपालको लागि एड्सजस्तो समस्या बनेको लोडसेडिङ जसको समाधान खोज्न कसैले सकेनन् । के अब आउने शताब्दीमा लोडसेडिङ हट्ला ? लोडसेडिङको एडिक्ट नेपाली जनता सबैलाई रिजर्वमा राख्नुपर्छ त्यो भयो भने त । अब कुरा गरौँ– अभाव, घाटा र भ्रष्टाचारको । के आयल निगम नाफामा आउला ? यो पढ्दा चाहिँ नहाँस्नुहोला । २२औँ शताब्दी हो, के होला–के होला ! पेट्रोल, डिजेल पानीसरी होला, कर्मचारीहरुको बुद्धि आउला, केस नपाएर अख्तियार नै हराउला । अहिले बनेको ग्यास उपभोक्ता कार्ड अर्को शताब्दीसम्म पक्कै प्रयोगमा आउला । आउला र खाउँला ।
धेरै नै सकारात्मक कल्पना ग¥यो यसले भन्नुहोला । कल्पनामा रमाउने त हो, सत्यता त के होला–के होला ! पानी, डिजेल, पेट्रोलसरी अभाव हुने पो हो कि ! एउटा अख्तियारले नभ्याएर २–४ वटै चाहिने पो हो कि ! आयल निगम गयल निगम हुने पो हो कि ! उपभोक्ता कार्डको के कुरा, फेरि दाउरातिर झर्नुपर्ने पो हो कि ! अनि दाउरा खोज्नचाहिँ कहाँ जाने हो, सोच्नैपर्छ २२औँ शताब्दीमा ।
अब कुरा गरौँ, संस्कृतिको कल्पना गर्ने नै हो भने किन बाँकी राख्नु श्राद्ध गर्न ? त्यो पक्कै नरोकिएला । पिता ड्याड भए पनि र माता मम भए पनि अभिभावकलाई मान्न पक्कै नछोडिएला । अहिलै त सुरू हुन थाल्यो रे भन्या सुन्या हो मैले त । अर्को शताब्दीसम्म के होला–के होला !
गरिब, दुःखीले फ्री उपचार पाउला । किड्नी बेच्ने डाक्टर पक्कै नआउला । स्वास्थ्य जनशक्ति यथेष्ट पाउला, उपचारको कमीले कसैले ज्यान नगुमाउला । पैसाले डाक्टरलाई नछोला, अवसरको खोजीमा कुनै डाक्टर पलायन नहोला ।
शिक्षा–नीति गुणस्तरीय आउला । सबैले रोजगारीको अवसर पाउला । कृषि, उद्योग, व्यापार देशमा फस्टाउला । के मेरो देशले भविष्यमा साँच्चै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा फड्को मार्ला ? के भावीपुस्ताले शान्त, समृद्ध र विकसित मुलुक पाउला ?
स्वतन्त्र र स्वचालित देश होस्, राजनीतिक स्थिरता रहोस् । राष्ट्रिय भेष होस्, पशुपतिनाथको कृपा रहोस् । अरुको इशारामा देश नचलोस् । १० सेमी कपडाले पुग्ने हाम्रो भेष नहोस् । देशमा भ्रष्टाचारको रेस नहोस् । विदेशले चाल चल्ने चेस नहोस् र धनी र शोषकको ऐस नहोस् ।